५६ सेकेण्ड अगाडि
आज सोमबार पशुपतिनाथको दर्शन गर्दै राशिफल पढ्नुहोस ! - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
आज सोमबार पशुपतिनाथको दर्शन गर्दै राशिफल पढ्नुहोस !
२०७७ साल अधिक आश्विन शुक्ल पक्ष असोज ५ गते सोमवार चतुर्थी तिथि विशाखा नक्षत्र चन्द्रमा तुला राशिमा ३ः३३ सम्म पछि वृश्चिक राशिमा
बिर्सने बानिले सताउला । कामहरु सजिलै बन्नेछन् । आय–आर्जनमा राम्रै प्रगति हुनेछ । शत्रुपक्षको भय रहला । मान्यजनको काममा सहयोग रहनेछ । काम गर्नमा मन लाग्नेछ । उठ्न बाँकि पैसा उठ्नेछ । पुराना साथी संग भेट हुने छ ।
समस्या समाधान हुनेछ । आर्थिक कुरामा सावधान रहनुहोला । मायामा खट पट हुन सक्छ । नयाँ ठाउँको यात्रा हुनेछ । ज्ञान प्राप्त हुनेछ । कामको सहि मूल्याङकन हुनेछ । काममा जुट्न सके सफलता हात पर्नेछ । स्वास्थ्यका बारेमा चनाखो रहनु होला । परिवारमा सामान्य मनमु टाव हुन सक्छ ।
काममा नयाँ अनुभुति हुनेछ । अल्छीपन बढ्ला । प्रेम प्रसंग रमाईलो रहनेछ । व्यापार व्यवसायमा राम्रो समय छ । कामहरु बिस्तारै बन्दै जानेछन् । वाद विवाद गर्नबाट जोग्गिनु होला । धुमफिरमा रमाउन पाइनेछ । कला क्षेत्रमा सफलता पाइनेछ । नयाँ कामको योजना बन्ने छ ।
कमाईका नयाँ बाटा दिमागमा आउनेछन् । अपजश पाइएला सााधान रहनु होला । शरीरमा अल्छीपन रहला । बाहिर को काममाब्यस्त रहनु पर्ला । जग्गाजमिन सम्बन्धी कुरा हुनेछ । सञ्चार क्षेत्रको काममा फाइदाजनक समय छ । सवारी साधन अनि हातहतियार संग भने सावधानि अपनाउनु पर्नेछ ।
आनन्द पूर्ण समय रहनेछ । पारिवारिक माहोल जम्नेछ । कामहरु फटाफट बन्नेछन् । आय–आर्जन राम्रै हुनेछ । सहयोग पाइने छ । स्वास्थ्यमा बाधा देखिएला । पठन–पाठनमा बिशेष मन जानेछ । प्रेमसम्बन्ध बलियो रहला । नयाँ कामको योग छ ।
नशालु बस्तु बाट जोग्गिनु होला । अरुकोसहयोगमा समय खर्चनु पर्ला । साताको अन्त्यमाकामबन्ने योग छ । परिवारमा सुखको अनुभवहुनेछ । रमाइलो यात्रामा रम्न पाइनेछ । पराक्रम बढ्नेछ । आर्थिक समस्या समाधानहोला । कुरा काट्ने देखि सजग रहुनु होला ।
पठन–पाठनमा मन जानेछ । प्रेम प्रसंगमा प्रगतिहुनेछ ।आत्मविश्वास बढ्ने देखिन्छ । शैक्षिक क्षेत्रमा समय राम्रो छ । सांगितिक कार्यक्रममा सहभागी बन्नु पर्ला । नँया कुराको निर्णय लिँदा सावधान रहनुहोला । मीठा खानेकुराहरु प्राप्त हुनेछन् ।
शुभ समाचार सुन्न पाइनेछ । अपत्यारिला कामहरु बन्नेछन् । नयाँ मित्र सँग परिचय हुनेछ । समस्याहरु आफैं टाढा भाग्दै जानेछन । कुभलो चिताउनेलाई आफ्नो बनाउन सकिनेछ । नयां कामको लागि बढी मिहिनेत गर्नु पर्ला । ठुला व्यक्तिहरुसंग चिनजान हुनेछ ।
प्रगतिको महसुस हुनेछ छ । स्वास्थ्यका कुरामा सावधान रहनु होला । मायालुसंग भेटघाट र रमाइला कुरा हुनेछन् । अभिभावकजनको सहयोग पाइनेछ । बौद्धिक क्षमताको कदर हुनेछ । नयाँ काम सुरु गर्न राम्रो समय छ । घर परिवारमा सामान्य वि वाद उत्पन्न होला ।
आफन्त मिलनको योग छ । कलासँग सम्बन्धित काममा मन जानेछ । व्यवहारिक समस्याहरु हराएर जालान् । पाहुनाको स्वागत गर्न पाइनेछ । प्राविधिक कुराको ज्ञान बढ्नेछ । व्यापारमा राम्रो समय छ । काममा मन जानेछ । अचानक रुपैया पैसाको आगमनहुनेछ ।
बुद्धि बढ्नेछ । प्रेममा रमाइने छ । काममा बाधाहरु पर्लान । आर्थिक लाभहुनेछ । पढाइ लेखाइतिर चासो कामहोला । छोटो दुरीको यात्राहुनेछ । काममा प्रशंसापाइएला । इष्टमित्रबाट आवश्यक सहयोग मिल्नेछ । अरुको सरसहयोगमा समय खर्चनु पर्ला ।
साझेदारी काममामा रुचि बढ्नेछ । स्वास्थ्यमा समस्या देखिन सक्छ । रमाइलो वातावरणमा कामहरुबन्नेछन ।साथीबाट सोचे जस्तो सहयोग नपाइएला । विदेशयात्राको योग बनिरहेकोछ । मायामा रमाउनपाइनेछ । आफन्तको शुभ समाचार सुनिनेछ ।